काठमाडौं । नेपालका लागि १३औं साग सबैभन्दा सफल साग बनेको छ । बिहीबार ३६ स्वर्ण जितेसँगै नेपालले सागमा सर्वाधिक स्वर्ण जितेको किर्तिमान कायम गरेको हो । यसअघि नेपालले सन् १९९९ मा काठमाडौँमा आयोजित सागमा ३१ वटा स्वर्ण पदक जितेको थियो । बिहीबार नेपालले सा ...
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल पार्न सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) का अध्यक्षसँग अनुरोध गरेका छन् । अध्यक्ष पन्तले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत एनसीसी अध्यक्षहरुसँग अनुरोध गरेका हुन् । अध्यक्ष पन्तल ...
कराते विधामा स्वर्ण पदक जितेपछि खुशी हुँदै अनुपमा मगर । मगरले ६८ किलो तौल समूहमा पाकिस्तानी खेलाडीलाई पराजित गरेर स्वर्ण पदक हात पारेकी हुन्। +
Page 1 out of 1366
काठमाडौं । नेपालका लागि १३औं साग सबैभन्दा सफल साग बनेको छ । बिहीबार ३६ स्वर्ण जितेसँगै नेपालले सागमा सर्वाधिक स्वर्ण +
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल पार्न सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) का +
काठमाडौं । न्याय परिषद्का सदस्य पदमप्रसाद वैदिकले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सदस्य वैदिकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राजीनामा पेश गरेका +
यस्तो छ शनिवार साँझ सम्मको उपनिर्वाचनको परिणाम
बाग्लुङमा जीप दुर्घटना हुँदा १४ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु
१२ बजे लण्डनस्थित भारतीय दुतावासमा भेला हुन एनआरएन युकेको आग्रह
गुल्मी जिल्ला समाज यूकेको च्यारिटी आइतबार
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल पार्न सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) का अध्यक्षसँग अनुरोध गरेका छन् । अध्यक्ष पन्तले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत एनसीसी अध्यक्षहरुसँग अनुरोध गरेका हुन् । अध्यक्ष पन्तले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, एनआरएनएले नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० +
काठमाडौँ । १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद अन्तर्गत बिहीबार भएको महिला २ सय मिटर फ्री +
काठमाडौं । न्याय परिषद्का सदस्य पदमप्रसाद वैदिकले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सदस्य वैदिकले राष्ट्रपति +
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आज डिस्चार्ज गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार +
Page 1 out of 2345
न्यूयोर्क । भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको भूमि परेपछि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सो नक्साप्रति आपत्ति जनाउँदै न्यूर्योकस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा गइ ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ। नयाँ नक्सामा नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको विषयलाई लिएर संघले संयुक्त राष्ट्रसंघको +
नेपालका लागि बेलायती पहिलो महिला राजदूत
नेपाल लाइब्रेरी फाउण्डेसनको युरोप संयोजकमा शिवजी श्रेष्ठ
नर्वेको भारतीय दूतावास अगाडि ‘गो व्याक इन्डिया’
प्रेम मनबाट हुन्छ । एक अर्काप्रति मायाभाव र सम्मानभाव रहन्छ । त्यागको भावना पनि हुन्छ । तर यस्ता पनि मानिस हुन्छन् जो केवल प्रेमका नाममा स्वार्थ मात्र लिन खोज्छन् । यस्तै हुँदा प्रेमिका ठहरै भइन् । एकजना करोडपति व्यक्तिले प्रेमिकासँग कडा सम्भोग गरे । सम्भोगका +
मेरो प्रशंसा गर्नुभयो, मैले उहाँलाई मन पराएँ
राँझा। भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गर्दै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा जङ्गल सफारी खुला गरिएको छ। भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य 10
एडिलेडले गायो ‘गाउँ गाउँबाट उठ’
२०७६ काे मिस्टर र मिस माेडर्न उपाधि सर्वाेच्च र टिसालाई
फिचर फाेटाेफिचरताजा खबर
काठमाडौँ । नेपालमा आयोजित १३औँ दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय खेलकूद (साग) को दशरथ रङ्गशालामा उद्घाटन भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयोजित भव्य समारोहबीच उद्घाटन गरेकी 10
ताजा खबरखेलब्रेकिङ न्युज
काठमाडौं । नेपालका लागि १३औं साग सबैभन्दा सफल साग बनेको छ । बिहीबार ३६ स्वर्ण जितेसँगै नेपालले सागमा सर्वाधिक स्वर्ण जितेको किर्तिमान कायम गरेको हो । यसअघि नेपालले सन् १९९९
उसुमा नेपालकी नीमा घर्तिमगरले जितिन् स्वर्ण, स्वर्णको संख्या ३०
Page 1 out of 118
KATHMANDU: Minister for Foreign Affairs Pradeep Kumar Gyawali held delegation-level talks with his Russian counterpart Sergey Lavrov in Moscow on Monday. According to the Ministry of Foreign Affairs, the two Ministers exchanged views on various aspects of bilateral relations. They underscored the importance of the exchange of high-level visits, including the judicial, parliamentary and business exchanges. Minister Gyawali handed over
London,5Nov : Nepal U-19 cricket team faceda38-run defeat at the hands of Marylebone Cricket Club (MCC)
Sanskrit, the greatest language of the world, is nearly forgotten in Nepal. Children in school do not read Sanskrit. Sanskrit